ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းက ဦး နှောက်ကိုစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေတဲ့စိတ်ကျဆင်းမှုမှကာကွယ်ပေးပုံ - Your Brain On Porn
အဆိုပါဂျာနယ်အတွက်လေ့လာမှုမှာ ကလာပ်စည်း, Jorge Ruas နှင့်မာရီယာ Lindskog ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းကြွက်တွေမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကနေဦးနှောက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်ကိုမည်သို့ပြပါ။ Credit: Ulf Sirborn
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စိတ်ကျရောဂါကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပါအဝင်လူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်အများကြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သို့သော်ယခုတိုင်အောင်ဒီအကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေသောယန္တရားများမသိသောခဲ့ကြပြီ။ ကြွက်များတွင်လေ့လာမှုအသစ်မှာတော့ဆွီဒင်နိုင်ငံ Karolinska Institute မှာသုတေသီများလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ရေးစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်းစုဆောင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ၏အသွေးအပြစ်ကိုပယ်ရှားနိုင်သောအရိုးကြွက်သားပြောင်းလဲမှုများ induces, နှင့်ဦးနှောက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြသပါ။ အဆိုပါလေ့လာမှုဂုဏ်သတင်းဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလျက်ရှိသည် ကလာပ်စည်း.
Neurobiological အသုံးအနှုန်းများအရစိတ်ကျရောဂါဆိုတာဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုသည်ပဟေinိဆန်သောအခြားအပိုင်းတစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကကာကွယ်ပေးသောဇီဝဓါတုဗေဒပြောင်းလဲမှုများအတွက်ရှင်းပြချက်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်” ဟု Karolinska Institutet မှအာရုံကြောသိပ္ပံဌာနမှသုတေသီ Mia Lindskog ကပြောကြားသည်။
ဒါဟာပရိုတိန်း PGC-1α1 (အသံထွက် PGC-1alpha1) လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအရိုးကြွက်သားအတွက်တိုးပွါးနှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်အကျိုးရှိသောကြွက်သားအေးစက် mediates သော။ လူသိများခဲ့သည် ဒီလေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေ (ပင်ကျင့်သုံးခြင်းမရှိဘဲ) ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်သားအများအပြားဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသကြောင်းအရိုးကြွက်သားအတွက် PGC-1α1၏မြင့်မားနှင့်အတူတစ်ဦးမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောကြွက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဤ ကြွက်နှင့်ပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်, အလင်းအိမ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်, ထိုကဲ့သို့သောကျယ်လောင်ဆူညံသံအဖြစ်တစ်ဦးစိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့နှင့်မမှန်ကြားကာလမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian ရစ်သမ်ပြောင်းပြန်ခဲ့ကြသည်။ (ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်သားဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ) ကမျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်ထားသောကြွက်မျှစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေရှိခဲ့သော်လည်းပျော့စိတ်ဖိစီးမှု၏ငါးပတ်ပြီးနောက်ပုံမှန်ကြွက်, စိတ်ကျရောဂါအပြုအမူတီထွင်ခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကန ဦး သုတေသနအယူအဆကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကြွက်သားကပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတာပါပဲ အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှု ဦး နှောက်ပေါ်မှာ။ တကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ် - ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားတဲ့ကြွက်သားကကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုသန့်စင်ပေးတဲ့အင်ဇိုင်းတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဤအခြေအနေတွင်ကြွက်သား၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ကျောက်ကပ်သို့မဟုတ်အသည်းနှင့်ဆင်တူသည်” ဟု Karolinska Institutet၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒဌာနမှအဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Jorge Ruas ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါသုတေသီများကြွက်သားအတွက် PGC-1α1၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူကြွက်တွေလည်း KAT ကိုခေါ်အင်ဇိုင်းတွေ၏အဆင့်မြင့်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ KATs kynurenic အက်ဆစ်, ဦးနှောက်မှထိုအသွေးထဲကနေသွားမတတျနိုငျသောပစ္စည်းဥစ္စာသို့စိတ်ဖိစီးမှု (kynurenine) အတွင်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာ convert ။ kynurenine ၏အတိအကျ function ကိုလူသိများသည်မဟုတ်, kynurenine ၏မြင့်မားစိတ်ရောဂါနှင့်အတူလူနာတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေကသာမန်ကြွက် kynurenine ပေးခဲ့သည့်အခါကြွက်သားအတွက် PGC-1α1၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကြွက်ဘေးဒဏ်မဟုတ်ကြစဉ်, သူတို့က, စိတ်ကျရောဂါအပြုအမူပြသကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက်သားအတွင်းရှိ KAT အင်ဇိုင်းတွေအလျင်အမြန်အကာအကွယ်ယန္တရားအတွက်ရရှိလာတဲ့, kynurenic အက်ဆစ်ကပြောင်းကတည်းကတကယ်တော့ဤတိရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့ရဲ့သွေးထဲမှာမွငျ့မား kynurenine အဆင့်ဆင့်ကိုပြသတာပါ။
“ ဒီအလုပ်ကစိတ်ကျရောဂါကုသမှုအတွက်ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာနိယာမသစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ အရိုးကြွက်သား function ကိုအစား ဦး နှောက်ကိုပစ်မှတ်ထား၏။ အရိုးကြွက်သားသည် detoxification အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပုံရပြီး activated လုပ်သောအခါ ဦး နှောက်ကိုစော်ကားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ရောဂါများမှကာကွယ်ပေးသည်။
စီးပွားပျက်ကပ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတစ်ဘုံစိတ်ရောဂါရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကထက်ပိုမို 350 လူဦးရေသန်းထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းထားသည်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: 'အရိုးကြွက်သား PGC-1α1သည် Kynurenine ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းကိုထိန်းညှိပေးသည်'၊ Leandro Z. Agudelo, Teresa Femenía, Funda Orhan, Margareta Porsmyr-Palmertz, Michel Goiny, Vicente Martinez-Redondo၊ ၊ မာနာဘတ်၊ အိုင်နာရှပ်ပါ - ကိုistinen၊ အာမန်ဒါပီတာဆင်၊ Duarte MS Ferreira၊ အန်နာခရွတ်၊ ကလာပ်စည်းအွန်လိုင်း 25 စက်တင်ဘာလ 2014 ။
ပေး Karolinska Institute က